Southwest Airlines ayaa sheegtay in Hawlaha Duullimaadka Jamaica ee Upswing
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Southwest Airlines ayaa sheegtay in Hawlaha Duullimaadka Jamaica ee Upswing
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Southwest Airlines waxay duulimaadyo cusub ka bilaabi doontaa Hawaii magaalooyinka Las Vegas, Los Angeles, iyo Phoenix
Madaxda Southwest Airlines Arbacadii, Sebtember 22, 2021, xaruntooda Dallas, Texas, waxay ku wargeliyeen Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, in hawlgalkooda duulimaadka ee Montego Bay toddobaadyada iyo bilaha soo socda ay aad ugu dhow yihiin heerarka rikoodh-ka-hortagga ee 2019, taasoo muujineysa dalabka kordhay ee Jamaica ee socdaalka Mareykanka.
Madaxda dalxiiska ee Jamaica waxay kulamo isdaba joog ah la qaadanayaan hogaamiyayaasha warshadaha socdaalka ee suuqyada isha Mareykanka iyo Kanada.
Ujeedada ayaa ah in la kordhiyo dadka imanaya halka loo socdo iyo sidoo kale in la kobciyo maalgashi dheeraad ah oo lagu sameeyo waaxda dalxiiska.
Iskaashiga xooggan ee u dhexeeya Jamaica iyo Southwest Airlines ayaa sii kordhaya waaxda dalxiiska ee qaranka waqtiyadan adag.
Koonfur Galbeed waa mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ugu waaweyn Mareykanka waana shirkadda ugu weyn ee diyaaradaha xamuulka ee jaban. Waxay ka shaqaysaa duulimaadyo aan joogsi lahayn oo u dhexeeya garoomada diyaaradaha caalamiga ah ee waaweyn ee Maraykanka ee Houston (Hobby), Fort Lauderdale, Baltimore, Washington, Orlando, Chicago (Midway), St. Louis, iyo Montego Bay.
Wasiirka waxaa kulanka ku weheliyay Agaasimaha Dalxiiska, Donovan White; Istaraatijiyad sare oo ka tirsan Wasaaradda Dalxiiska, Delano Seiveright; iyo Agaasime Ku -xigeenka Dalxiiska ee Qaaradda Ameerika, Donnie Dawson. Waxay qabanayaan shirar isdaba joog ah oo ay la leeyihiin hogaamiyaasha warshadaha safarka oo aad u balaadhan suuqyada isha ugu weyn ee Jamaica, Mareykanka iyo Kanada, si kor loogu qaado dadka imanaya usbuucyada iyo bilaha soo socda iyo sidoo kale kobcinta maalgashi dheeraad ah oo lagu sameeyo waaxda dalxiiska.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett
Bartlett oo faahfaahsan Guulihii Jamaica ee dib u furitaanka Sanadkii la soo dhaafay bartamihii masiibada COVID-19, aasaaska Waddooyinka adkeysiga leh, oo adduunka oo dhan loo aqoonsaday inay tahay COVID badbaado u leh booqdayaasha iyo Jamaicans-ka, iyo muhiimadda iskaashiga xooggan ee u dhexeeya Jamaica iyo Southwest Airlines si loo kobciyo waaxda dalxiiska qaranka ee kuwan waqtiyada adag.
Koonfur -galbeed, Agaasimaha Sare ee Qorshaynta Istiraatiijiyadeed & Iskaashiga Diyaaradaha, Steven Swan, ayaa xusay in Jamaica wuxuu ahaa "mid laga fikiray," "cad," "fududahay in lala xiriiro," wuxuuna ku faanaa "arrimo culeys wanaagsan leh." Maamulayaasha diyaaradda ayaa sidoo kale xusay in inkasta oo Delta kala duwanaanshaha COVID-19 ay sababtay “hoos u dhac” dalabka socdaalka gudaha iyo kan caalamiga ah, haddana waxay sii wadaan inay si wanaagsan u shaqeeyaan oo ay aad ugu kalsoon yihiin koritaanka mustaqbalka.